Tolkning till mitt språk - Ku turjuman luuqadeyda - 1177
Tolkning till mitt språk - somaliska
Ku turjuman luuqadeyda
Waxa ku caawin kara turjumaan haddii aanad Iswiidhish ku hadlin. Waxa uu turjumaanku kaa caawinayaa in laguu turjumo markaad daryeelka caafimaadka ama daryeelka ilkaha booqanayso. U sheeg inaad turjumaan luuqaddaada ku hadlo u baahan tahay markaad ballanataada booqashada qabsaneyso.
Turjumaan ka shaqeynaaya sidii uu ugu turjumi lahaa luuqado kala duwan.
Waxba kama bixinaysid kaalmada turjumaanka.
Muxuu turjumaanka luuqaddu qabtaa?
Waxa uu turjumaanku turjumaa waxa uu shaqaalaha daryeelka caafimaadku sheegayo si aad u fahanto. Turjumaanka ayaa garanaya af Iswiidhish iyo luuqaddaadaba.
Turjumaanku wuxuu turjumi karaa haddii aad su'aalo qabtid. Kadibna waxa uu turjumaanku luqaddaada kuugu turjumi doonaa jawaabta ka soo baxda shaqaalaha daryeelka caafimaadka.
Turjumaanka ayaan badanaa qoraalada qoran turjumin.
Qaabkan ayuu kulan turjumaan u dhici karaa
Kani waa tusaale muujinaaya sida uu kulan turjumaan u dhici karo:
Turjumaanka ayaa jooga kulankaaga shaqaalaha daryeelka caafimaadka.
Turjumaanka ayaa kulanka kaga qeybgalaya telefoon sameecad leh.
Adiga, shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo turjumaanka ayaa wada xidhidhaaya iyadoo la isticmaalaayo kamarad iyo kombiyuuter. Waxa taas loo yaqaanaa turjumaada maqalka iyo muuqaalka (fiidyaha) laga sameeyo.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka weydii nooca tarjumaan ee aad heli karto markaad ballantaada booqashada qabsaneyso.
Waxa turjumaanka saaran waajibaadka sir qarinta
Tujumaanka waxa qabanaya waajibaadka sir qarinta. Waxay taas micnaheedu tahay in aanu turjmaanku bixin macluumaadka ku khuseeya iyadoo aanu ogolaansho kaa haysan.
Mararka qaar ayaa xubnaha qoyska ama saaxiibadu kaa caawin karaan turjumaadda. Waxay taasi mararka qaar horseedi kartaa isfaham la'aan. Mana laha iyagu masuuliyadda sir qarinta. Waxa sidaas darteed ka wanaagsan in caawimo laga helo qof turjumaan ahaan ku shaqeeya.